Moments Neshamwari 58
Chii chinotikurudzira kuti tishandure mafungiro edu. Kusvika pamweroi isu tinobvumirwa kupokana nemifungo yedu kune yevamwe?
Mafungiro anokonzerwa nekufunga. Pfungwa maonero anoitwa pakati pekutenda uye kuziva zvine chekuita nezvezvinhu kana zvinhu. Mumwe ane mafungiro nezvechinhu, anogona kusiyanisa neavo vanogona kuziva kana kwekungotenda nezvenyaya yacho. Mumwe ane maonero nekuti akafunga nezvenyaya yacho. Maonero ake anogona kunge ari echokwadi kana asiri iwo. Kunyangwe ichokwadi kana kuti kwete zvichienderana nenzvimbo yake uye nzira yekufunga nayo, Kana kufunga kwake pasina rusaruro, mazano ake anowanzove akajeka, uye, kunyangwe akatanga nepasipo, anovaratidza kuti havana kunaka munzira. kufunga kwake. Kana, zvakadaro, achitendera kusarura kuchikanganisa kufunga kwake, kana kuseka nzvimbo yake pane rusaruro, mafungiro aanoumba kazhinji haangavi asina kunaka.
Mafungiro akaitwa nemurume anomiririra iye chokwadi. Anogona kunge ari kutadza, zvakadaro anovatenda kuti ndizvozvo. Mukushaikwa kwezivo, murume achamira kana kudonha nemazano ake. Kana maonero ake aine chekuita nechitendero kana chimwe chakanakira, anotenda kuti anofanira kuvaimira uye anonzwa achifarira kuita kuti vamwe vatore mafungiro ake. Ipapo ndipo panobuda kutendeuka kwake.
Icho chinotikurudzira kuti tishandure kune edu maonero kutenda kana ruzivo irwo rwunogadzirisa mazano edu. Tinogona kukurudzirwawo nechido chekuti vamwe vabatsirwe kubva pane izvo zvatinoona zvakanaka. Kana paruzivo rwepazasi rwemunhu uye chishuwo chekuita zvakanaka chikawedzerwa kufunga kwemunhu, kuedza kushandura vamwe kuti vave nemaonero avo kunogona kukudziridza kufuridzira, uye, pane zvakanaka, kukuvara kuchaitwa. Chikonzero uye kufarirwa kunofanirwa kuve kwatinotungamira mukutendeudzira kwemaonero edu. Chikonzero uye chakanaka-zvinotitendera kuti tipe maonero edu mukupokana, asi tirambidze isu kuyedza kumanikidza vamwe kuzvigamuchira. Chikonzero uye chakanaka-zvinotirambidza kuti tisimbirire kuti vamwe vagamuchire uye vashandurwe kune zvatinofunga, uye vanotiita vakasimba uye vakatendeseka mukutsigirwa kwezatinofunga isu tinoziva.